Abakhiqizi nabaphakeli | I-Meiben
Izici zezindwangu zezokwelapha nezempilo
1. Esilula: I-polypropylene resin isetshenziswa njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko zokukhiqiza, ezinamandla adonsela phansi we-0,9 kuphela, okuyizingxenye ezintathu kwezinhlanu kuphela zikakotini. Iyabhibha futhi izwa kamnandi;
2. Ubumnene: Yenziwe ngemicu emihle (i-2-3D) futhi yakhiwa yi-light-point hot-melt bonding. Umkhiqizo oqediwe uthambile ngokulingene futhi unethezekile;
3. Okuxosha amanzi nokuphefumulekayo: Izicucu zePolypropylene azimunci amanzi, azinawo umswakama omningi, futhi zinokuxoshwa okuhle kwamanzi. I-fiber yenziwe ngokungena komoya okuhle futhi okunomoya. Kulula ukugcina indwangu yomile futhi igezwa kalula;
4. Okungeyona into enobuthi futhi engacasuli: Umkhiqizo ukhiqizwa ngezinto zokusetshenziswa zebanga lokudla ze-FDA, ayinazo ezinye izithako zamakhemikhali, inokusebenza okuzinzile, ayinabuthi, ayinalo iphunga elikhethekile, futhi ayicasuli isikhumba;
Ukumelana namakhemikhali: I-Polypropylene iyinto engamakhemikhali ebuthuntu, hhayi edliwe yinundu, futhi ingahlukanisa ukugqwala kwamagciwane nezinambuzane kulolo ketshezi; ukugqwala kwe-alikhali, umkhiqizo ophelile awuthinti amandla ngenxa yokuguguleka;
Umdwebo wesistimu yemishini
Inqubo ubuchwepheshe bomugqa wokukhiqiza ongalukanga
Imodeli yomugqa wokukhiqiza ongalukanga
Uyini umshini wokukhiqiza wendwangu ongalukiwe
imishini yokukhiqiza indwangu engalukiwe ingumshini owenza izindwangu ezingalukiwe zibe yizingubo zokuhlinza, izingubo zokuzivikela, amaski, ukotini wesikhala, izinto zokwambathisa, okokuhlunga ukotini neminye imikhiqizo eqediwe. Kubandakanya uchungechunge lwemishini engalukiwe efana nemaskhi yokukhiqiza amaski, imishini yengubo yokuhlinza yokukhiqiza imijiva yokuhlinzwa, kanye nemishini yokuhlunga ukotini yokweluka ukotini wokuhlunga. Izinsiza zokucubungula izindwangu ezingalukiwe ukukhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene, kufaka phakathi: umshini wesikhwama ongalukanga, umshini wekhava womcamelo ongavukanga, umshini wekhava wezithelo ongalukanga, umshini we-cap owelukiwe, umshini wesigqoko se-hat ongalukanga . Imishini yokukhiqiza indwangu engalukanga inaka ukunemba kokusebenza kwemishini nokukhethwa kwezinto ezintsha, ithuthukisa izinga lokuhlanganiswa kwemishini nogesi, iphinde isebenzise ukutholwa nokulawulwa kwe-inthanethi kwamakhompiyutha nezinhlelo zokuqinisekisa ukukhiqizwa okuphezulu nokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu. Imishini yokukhiqiza indwangu engalukanga kufanele ithuthukele ekwenzeni izinto eziningi, inhlanganisela nokwehlukanisa, kanye nemikhiqizo yendwangu engalukanga ebolayo.
Langaphambilini Spunmelt esiyinhlanganisela umugqa ukukhiqizwa nonwoven, spunbonded umugqa ukukhiqizwa nonwoven
Olandelayo: Umugqa Wokuhlinzwa Kwendwangu Wensimbi ye-SMS SS Nonwoven Indwangu Umshini Osezingeni Eliphezulu we-PP Spunbond Nonwoven Fabric Production Line
SMS SS S PP Spunbond Nonwoven Indwangu Ukwenza Ma ...
PP Meltblown Production Nonwoven Indwangu Ukwenza ...
Amathegi ashisayo, Hot Products, Ibalazwe Amagama angukhiye B, Amagama angukhiye A, amagama okuhlola,